TechPana | Digging into Tech
बिहीबार, जेष्ठ १५, २०७७ २१:२३
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आफ्नो बैंकिङ सफ्टवेयर प्रतिस्थापन गरेको छ । बैंकले भर्खरै आफ्नो कोर बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टम नै स्थानान्तरण गरेको हो । बैंकिङ सफ्टवेयर नयाँ राखिएसँगै बैंकमा रहेका सबै खाता नम्बरहरु समेत परिवर्तन भएको जनाइएको छ । जसका कारण अब प्रभु बैंकमा रहेका सबै
आईतवार, जेष्ठ १८, २०७७ १४:०८
आईतवार, जेष्ठ १८, २०७७ ०९:१३
मंगलवार, जेष्ठ १३, २०७७ १३:३३
सोमबार, जेष्ठ १२, २०७७ १७:५४
मुटुको धड्कन र कोरोनाको ज्वरो नाप्ने मोबाइल, कति छ मूल्य ?
शनिबार, जेष्ठ १०, २०७७ १३:२२
फाल्कन नाइन रकेट प्रक्षेपणसँगै स्पेस एक्सले रच्यो इतिहास
फेसबुकपछि भारतीय टेलिकमको शेयर खरिद गर्दै गूगल र…
काठमाडौं । भारतीय टेलिकम कम्पनी रिलायन्स जियोको ९.९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व फेसबुकले खरीद गरेको धेरै दिन वितेको छैन । यसैबीच
आईतवार, जेष्ठ १८, २०७७ १८:०१
अब सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डमा २ प्रतिशत कर…
काठमाडौं । सिम कार्ड र रिचार्ज कार्डमा दुई प्रतिशत टेलिफोन स्वामित्व कर लाग्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका
बिहीबार, जेष्ठ १५, २०७७ २१:०९
इन्टरनेटको दूरसञ्चार सेवा शूल्कमा ५० प्रतिशत छूट
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा शूल्कमा छूट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक
बिहीबार, जेष्ठ १५, २०७७ १८:४४
निर्देशन अवज्ञा गर्दै नवीकरणको नाममा २ वर्षदेखि पैसा…
काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै ग्राहकबाट पैसा काटिरहेको पुष्टी भएको छ
बुधबार, जेष्ठ १४, २०७७ १४:५१
दोस्रो धेरै नाफा कमाउने सरकारी संस्थानमा टेलिकम, प्रतिशेयर…
काठमाडौं । सरकारका कूल ४४ संस्थानहरुमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा दोस्रो नम्बरमा परेको छ । अर्थ
बुधबार, जेष्ठ १४, २०७७ १२:४३
व्यवसायका लागि के अझै पनि ल्याण्डलाइन फोन आवश्यक…
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले सञ्चार गर्दा टेक्स्ट म्यासेजमार्फत चाँडोसँगै सस्तो मूल्यमा सूचना धेरै ग्राहकहरुमाझ पुर्‍याउन सक्छन् । यसकारण धेरै व्यवसायीहरुले अहिले
आईतवार, जेष्ठ ११, २०७७ १४:३५
टेलिकमसँग सम्बन्धित समस्या आयो ?, भोलिदेखि खुल्नेछन् कम्पनीका…
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जेठ ११ गतेदेखि एक हप्तासम्मका लागि काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालय अन्तर्गतका विभिन्न काउन्टरहरु खुल्ला गर्ने भएको छ
शनिबार, जेष्ठ १०, २०७७ १४:४८
भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसिया र सिंगापुरपछि थाइल्याण्डले बनायो राष्ट्रिय…
काठमाडौं । थाइल्याण्डमा २६ सदस्यीय राष्ट्रिय फाइभजी समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रायुट चान ओ चाको अध्यक्षतामा उक्त २६
बिहीबार, जेष्ठ ८, २०७७ १८:१८
नेपालको मोबाइल ईन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महङ्गो मध्येमा
काठमाडौं । प्याक प्रयोग नगरी मोबाइल डेटा चलाउनु नेपाली प्रयोगकर्ताका लागि अझै पनि महङ्गो काम हो । मोबाइल डेटा चलाएको
बिहीबार, जेष्ठ ८, २०७७ ०९:३९
सिक्सजीमा चाइना युनिकम र जेडटीईबीच सहकार्य, कस्तो होला…
काठमाडौं । अमेरिकाले थप एक वर्षका लागि ह्वावेमाथि प्रतिबन्ध लम्ब्याएको छ । फाइभजी लगायतको प्रविधिमा लगाइएको प्रतिबन्धले अमेरिका र चीनबीच
मंगलवार, जेष्ठ ६, २०७७ ११:०५
बिहीबार, जेष्ठ १५, २०७७ १३:४७
बुधबार, जेष्ठ १४, २०७७ ११:१८
इन्टरनेट उपकरणको चरम अभाव, मर्मतसम्भार नहुँदा प्रयोगकर्ताको गुनासो बढ्यो
आईतवार, जेष्ठ ११, २०७७ १३:१५
सस्तो मूल्यमा भायनेटको फास्ट इन्टरनेट
शनिबार, जेष्ठ १०, २०७७ १९:०८
इन्टरनेट स्पीडमा अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता, १ सेकेन्डमै हजार फिल्म डाउनलोड गर्न सकिने
शुक्रबार, जेष्ठ ९, २०७७ १६:३३
नेपालको फिक्स्ड इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै दोस्रो सस्तो
बुधबार, जेष्ठ ७, २०७७ १८:४१
इन्टरनेट सेवा सहज बनाउन सहप्रयोग
शुक्रबार, जेष्ठ २, २०७७ १८:५२
आविष्कार केन्द्रलाई आइस्पानले दियो ५ लाख, अन्यलाई नगद र स्वास्थ्य सामग्री
बिहीबार, जेष्ठ १, २०७७ १३:५९
सुबिसुको अवरुद्ध सेवा सञ्चालनमा, समस्या परेका ग्राहकलाई सम्पर्क गर्न आग्रह
बिहीबार, जेष्ठ १, २०७७ १२:४६
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी) ले वेबसाइट तथा एपका लागि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड जारी गरको छ । पछिल्लो
बजेटमा ४९ पटक प्रयोग भएको ‘प्रविधि’, होला त यो क्षेत्रको विकास ?
नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण कोषको रकम अब स्वतः सरकारी खातामा
कुनमा कर बढ्यो, कुनमा घट्यो ? हेर्नुहोस् आर्थिक विधेयक
अब सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डमा २ प्रतिशत कर लाग्ने
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आफ्नो बैंकिङ सफ्टवेयर प्रतिस्थापन गरेको छ । बैंकले भर्खरै आफ्नो कोर बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टम नै स्थानान्तरण गरेको हो । बैंकिङ सफ्टवेयर नयाँ राखिएसँगै बैंकमा रहेका सबै
आईतवार, जेष्ठ १८, २०७७ १९:०८
बजेट २०७७/७८ः नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
बिहीबार, जेष्ठ १५, २०७७ १७:३२
मोबाइल बैंकिङ सेवा लिनुभएको छैन ? अनलाइनबाटै एक्टिभ गर्न यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं । अब अननलाइनबाटै मोबाइल बैंकिङ एक्टिभ (सक्रिय) गराउन सकिने भएको छ । जुनसुकै बैंकमा खाता रहेका सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने गरी मोबाइल बैंकिङ सेवा लिन सक्ने भएका
बिहीबार, जेष्ठ १५, २०७७ १५:३१
काठमाडौं । नेपाली स्मार्टफोन बजारमा रुचाइएको ब्राण्ड साओमीले नेपालका लागि पहिलो फाइभजी स्मार्टफोन एमआई टेन सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० को अन्त्यसँगै फोरजी फोन उत्पादन बन्द गर्ने योजना बनाएको
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी साओमीले सन् २०२० को अन्त्यबाट फोरजी नेटर्वकमा आधारित स्मार्टफोनको उत्पादन बन्द गर्ने भएको छ । कम्पनीले सन् २०२१ बाट आफ्ना उत्पादन पूर्णरुपमा फाइभजी नेटर्वकमा
काठमाडौं । एउटा चर्चित आईफोन ह्याकिङ टिमले नयाँ ‘जेलब्रेक’ रिलिज गरेको छ । उक्त जेलब्रेकले सबै किसिमका आईफोनलाई अनलक गर्नसक्छ । यसले अहिलेको नयाँ आईओएस १३.५ मा रन भइरहेको नयाँ
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको लकडाउनका कारण विद्यालयहरु बन्द छन् । बच्चाहरुको पढाईको जिम्मेवारी अहिले विभिन्न अनलाइन कोर्स र प्लेटफर्मले उठाइरहेका छन् । यसबीच गुगलले विद्यार्थीलाई पढ्न सहयोग पुर्‍याउने नयाँ एप
पुरानो फोन छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस् घरको सुरक्षामा
टोर के हो र यसको प्रयोग कसरी गर्ने ?
अनलाइनमार्फत रिचार्ज गर्ने दुई जनालाई डिशहोमको प्रतिव्यक्ति १ लाख नगद
काठमाडौं । डिशहोमको डिलर दाइको डिस्काउन्ट योजना अन्र्तगत दुई जना भाग्यशाली ग्राहकले एक एक लाख नगद पुरस्कार हात पारेका छन् । गत जेठ ९ देखि जेठ १५ गतेसम्म अनलाइनमार्फत वाार्षिक
स्टार्टअपलाई आवश्यक पूँजी संकलनमा सघाउने एनआईबीएल एस क्यापिटलको योजना